RASMI: José Mourinho oo loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Roma – Gool FM
Dajiye May 4, 2021
(Roma) 04 Maajo 2021. Kooxda reer Talyaani ee Roma ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula saxiixatay macalinka reer Portugal ee José Mourinho, si uu kala wareego howsha tababarka ee kooxda macalinka ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Paulo Fonseca.
Kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa xilli hore ku dhawaaqday inuu ka tagayo shaqada tababarnimo ee kooxda macalinka reer Portugal ee Paulo Fonseca kaddib dhammaadka xilli ciyaareedkaan, maadaama ay kooxda la kulantay natiijooyin xun xilli ciyaareedkan oo dhan.
Kooxda AS Roma ayaa warkan ku sheegtay boggeeda rasmiga ah ee baraha bulshada:
“Kooxda waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay heshiis la gaartay Jose Mourinho si uu u noqdo tababaraha cusub ee kooxda, laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda 2021-2022.”
Si kastaba ha noqotee, Kooxda AS Roma ayaa ku jirta booska toddobaad ee jadwalka kala sareynta horyaalka Talyaaniga iyadoo leh 55 dhibcood, waxaana dhawaan guuldarro taariikhi ah ka soo gaartay Manchester United oo kaga adkaatay 6-2, kulankii lugta hore ee semi-finalka UEFA Europa League.
Marcelo oo Kooxdiisa Real Madrid ula safray Magaalada London... (Maxaa is-beddelay?)